कमेडी शो बन्द भएपछि के गर्दै छन् कपिल शर्मा – Medianp
कमेडियन कपिल शर्माको कार्यक्रमको नियमित दर्शक हुनुहुन्छ भने तपाईंको मनमा पक्कै प्रश्न उठेको हुनुपर्छ, अहिले उनी के गरिरहेका होलान् ?
अनुहार बिगारिएको भिडियोमा उनको अभिव्यक्ति सुनेर र मान्छेहरूले ठानिरहेका छन् कि कपिल ‘कमब्याक’ गर्ने तयारीमा छन् । यो अपेक्षा उनको फ्यानले गरेको पनि देखिन्छ । किनभने उनले सार्वजनिक गरेको छोटो भिडियो १३ लाखभन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् । कतिपयले कपिलको कमेडी मिस गरिरहेको कमेन्ट गरेका छन् । केहीले प्रश्न पनि गरेका छन्– टेलिभिजनमा कहिले फर्किने ?
गत वर्ष सोनी इन्टरटेनमेन्ट टेलिभिजनका कार्यकारी उप–प्रमुख दानिश खानले कपिल शर्मा टेलिभिजनमा छिट्टै फर्किने बताएका थिए । सो बन्द हुनुअघि केही महिना कपिल तनावमा पनि गएका थिए । कमेडियन सुनील ग्रोवरलाई जहाजमा यात्राकै क्रममा सबैसामु गाली गरेको तथा रक्सीको मातमा हंगामा गरको आरोप चर्चामा आएपछि उनी तनावमा आएका थिए । तर, उनले यस्तो आरोप खण्डन गर्दै सामान्य झगडा मात्रै भएको बताएका थिए ।
कपिल शर्मा टेलिभिजनका सफल स्टारको सूचीमा पर्छन् । उनको कमेडी सो निकै सफल हुनु नै उनी स्टार हुनुको कारण हो । सानो पर्दामा रहेर पनि ठूलो पर्दाका स्टारलाई टक्कर दिने ल्याकत राखेकैले कपिल निकै चर्चामा रहे । तर ‘कमेडी नाइट विद कपिल’को प्रसारण बन्द भएपछि टेलिभिजन दुनियाँमा निकै हल्ला चल्यो– कपिल शर्माको सोले अब पुरानो स्थान छाडिसक्यो । के अब फेरि टेलिभिजनमा फर्किए भने उनले आफ्नो पुरानो क्रेज फर्काउन सक्लान् ? नयाँ पत्रिकाबाट
डा.गोविन्द केसीलाई अदालत पुर्‍याइयो, माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन
निर्मला हत्याकाण्डः एआईजी धीरु बस्न्यातको टोली कञ्चनपुर पुग्यो
अष्ट्रेलियामा रोमान्टिक मुडमा देखिए धिरज र साम्राज्ञी, अफस्क्रिन पनि जम्यो दुईको जोडी